SAWIRRO: Maalinta dhir beerista Soomaaliya oo maanta laga xusay Magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSAWIRRO: Maalinta dhir beerista Soomaaliya oo maanta laga xusay Magaalada Muqdisho
SAWIRRO: Maalinta dhir beerista Soomaaliya oo maanta laga xusay Magaalada Muqdisho
17/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, April 17, 2018:- Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta dhir beerista Soomaaliyeed oo ku beegan 17 April.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiiro, xildhibaano iyo marti sharaf kale iyadoona ay soo qaban qaabisay munaasabaddan wasaarada xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka Hirshabeelle Xuseen Cismaan Cilmi ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin weyn islamarkaana loo baahan yahay in dalka laga bilaabo barnaamij lagu wacyi galinayo beerida dhirta.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Maxamud maxamed maxamud iyo Agaasimaa guud wasarada xaanaanada xoolaha Maxamed Cumar ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay beertan dhirta taasoo faa’iidooyin badan laga helo.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka mid ah xildhibannada golaha shacabka ee laga soo doortay Hirshabeelle ayaa ugu baaqay shacabka inay ilaaliyaan dhirta.
Xubnaha ka qeyb galay munaasabaddan ayaa dhamaantood shacabka ka codsaday in la joojiyo xaalufinta dhirta iyadoo ugu dambeyntii xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa lagu beeray geed dhireed.
S/Q Raxma Yuusuf Jimcaale.
Baareyaasha Caalamiga ee kiimikada oo loo ogolaaday dalka Suuriya
Daawo Sawiro:- Dowlada Qatar oo Gawaari ku wareejisay dowlada Soomaaliya